Izilumkiso zokuHamba zase-US, kodwa kungcono e-Bahamas
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zeBahamas Breaking » Izilumkiso zokuHamba zase-US, kodwa kungcono e-Bahamas
Iindaba zeBahamas Breaking • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Caribbean • Ukubambisa • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • Ukwakha kwakhona • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo • I-WTN
Uluhlu lwamazwe i-United States olongezayo "kuluhlu lokungahambi" luyakhula. Ukusukela izolo ikwabandakanya iBahamas.
Kusengcono kwaye kukhuselekile kwi-Bahamas xa kuthelekiswa nokuhamba kumazwe amaninzi ase-US afana neFlorida okanye iLouisana.
Kuba olo luhlu lwasekhaya aluhambi uluhlu alukho, kwaye uthelekiso lwasekhaya aluyonxalenye yesilumkiso sokuhamba kumazwe aphesheya, indawo zangaphandle ezixhomekeke kubakhenkethi ezinjengeBahamas ngoku zikhutshiwe yinkqubo yaseMelika.
Amaziko ase-US oLawulo lweNtsholongwane kunye noThintelo lweZifo (i-CDC) ikhuphe isilumkiso sokuhamba kwinqanaba le-4 kubakhenkethi baseMelika abaceba ukutyelela iBahamas.
Oku kunokuchaphazela iindwendwe ezikwi-Disney Cruise Line eziceba ukutyelela ilizwe lesiqithi kwinqanawa yokuhamba ngenqanawa iDisney kungekudala.
Ngelixa usulelo luphezulu e-United States, ziyancipha eBahamas, zibuza inqanaba lesi-4 izilumkiso ezikhutshwe yi-US ngokuchasene neBahamas engabamelwane.
I-CDC namhlanje yongeze amazwe ama-6 kuluhlu lwayo lwesilumkiso sokuhamba kwinqanaba le-4.
La mazwe mathandathu ongezelelweyo ku-US Musa ukuhamba kuluhlu ngala:
Ngaba kulunge ngakumbi ukutyelela iBahamas?
Kungcono kwiBahamas. Esi yayisilogeni seli lizwe esaziwa ngeelwandle ezintle ezimhlophe ezinesanti, amanzi aluhlaza kunye nesibhakabhaka esiluhlaza. Iibhasi zokuhamba ngeenqanawas ikwayinxalenye ebalulekileyo yeepotifoliyo zokhenketho kweli lizwe leCaribbean.
Eyona nto ibhetele kwiBahamas!
… Kodwa urhulumente wase-US namhlanje uyishiyile indawo yokuba kukhuseleke kangakanani ukutyelela iBahamas xa kuthelekiswa neFlorida okanye iHawaii. Endaweni yokuba urhulumente wase-US akhuphe isilumkiso sokungahambi kwinqanaba le-4 ngokuchasene nommelwane wakhe kwiikhilomitha ezili-100 nje kuphela kunxweme lwaseFlorida.
Uqoqosho lweBahamas luxhomekeke kushishino lokuhamba kunye nokhenketho. I-US ikhupha uLevel 4 izilumkiso zokuhamba ludano olukhulu kunye nesoyikiso kwisizwe esisesiqithini nakubemi baseBahama abangama-368,000. Uninzi lwazo luyasebenza kwaye luxhomekeke kwimpilo yezokhenketho kunye nomzi mveliso wokhenketho, kwaye amaMelika uninzi lwabo babakhenkethi.
Isilumkiso sokuhamba e-US ngokuchasene neBahamas sifundeka ngolu hlobo:
Sukuya kwiBahamas ngenxa Covid-19. Yiba nononophelo kwezinye iindawo zeBahamas ngenxa ulwaphulo-mthetho. Funda yonke ingcebiso ngezohambo.
Funda iSebe likaRhulumente Iphepha le-COVID-19 Phambi kokuba ucwangcise naluphi na uhambo lwamanye amazwe.
I-US Amaziko oLawulo lweNtsholongwane kunye noThintelo (CDC) ukhuphe i Inqanaba 4 Isaziso seMpilo seHambo seBahamas ngenxa ye-COVID-19, ebonisa inqanaba eliphezulu kakhulu le-COVID-19 elizweni. Umngcipheko wokufumana ikhontrakthi i-COVID-19 kunye nokukhula kweempawu ezinzima kunokuba sezantsi ukuba ugonywe ngokupheleleyo Isitofu sokugonya esigunyazisiweyo se-FDA. Ngaphambi kokucwangcisa naluphi na uhambo lwamanye amazwe, nceda uphonononge izindululo ezithile zeCDC ugonywe kwaye engagcinwanga abahambi. Ndwendwela iOfisi yoZakuzo Iphepha le-COVID-19 ngolwazi oluthe kratya kwi-COVID-19 kwi-Bahamas.
Uqoqosho lwaseBahamas luxhomekeke kukhenketho, kukhenketho lwaseMelikaSt
Okumangalisayo kukuba iUnited States yaphula zonke iirekhodi emhlabeni zosulelo olutsha kunye nokufa, ngelixa amanani eBahamas ekwidowntrend. Amanani osulelo kunye neenkcukacha zokufa kwiBahamas bezingaphantsi kwamanani kwi-State yaseFlorida okanye eHawaii xa zibonwa ngokwenani labemi.
Umahluko ophambili phakathi kwe-USA enkulu kunye neBahamas encinci kukugonya.
Nakuba Ama-33% abantu baseMelika bathi ngekhe bagonywe, kwaye uninzi lwabanye lugonyiwe, ngelixa ugonyo lufumaneka ngokulula e-US, iBahamas encinci ayinaso isitofu esaneleyo sokuyilawula kubemi bayo bonke. Yi-15.3% kuphela yabantu abagonywayo.
Ukwamkela iindwendwe ezigonyiweyo kubalulekile kwimpilo yeshishini lokuhamba kunye nezokhenketho eBahamas
I-Bahamas inike ingxelo yosulelo lwe-103 kubantu abayi-100,000 kwiintsuku ezisi-7 ezidlulileyo.
Amanani anjalo amele i-37% yencopho, ngelixa i-United States inika ingxelo ye-59% yosulelo oluphezulu.
Kuyaqondakala ukuba iSebe laseMelika laseMelika ligunyazisiwe ukuba lilumkise amaMelika ngobungozi baphesheya. Nangona kunjalo, ukuba kusekwe kumanani okuhlala eBahamas komntu ogonyiweyo waseMelika kucacile ukuba kukhuselekile kunokuhlala ekhaya kwiimeko ezininzi, kutheni iSebe likaRhulumente lifuna ukungayifaki le nyani kwiingcebiso zokuhamba kwamanye amazwe?
Lack yolungelelwaniso lwehlabathi kukhenketho
Omnye umzekelo apho ukunqongophala kobunkokheli behlabathi kwezokhenketho, okanye ubunkokeli behlabathi bungenabameli.
UJuergen Steinmetz, usihlalo we Ukhenketho lweHlabathik uthi: "Ukungabikho kolungelelwaniso nobunkokeli kushishino lwezohambo nokhenketho lwehlabathi sesona sisongelo kuqoqosho nakwimpilo."
I-Bahamas yindawo ekhuselekileyo necocekileyo yabo bonke ukuze bonwabe.
TIBhodi yezoKhenketho yaseBahamas ihlaziye iphepha layo lezempilo
Impilo kunye nokuphila kwabo bonke abangena okanye abahlala kwi-Bahamas bahlala beyona nto iphambili, kwaye iinzame ezikhuthazayo ziyanyanzeliswa ukunciphisa ukusasazeka kwe-COVID-19. Ezi nkqubo zilandelayo zokuhamba kunye nokungena zibekiwe ukuze kuqinisekiswe ukuba iBahamas yindawo ekhuselekileyo necocekileyo yabo bonke ukuba bonwabe.